Iyo App Store yekuongorora chishandiso yave kuwanikwa | IPhone nhau
Iyo iTunes Unganidzo yekuongorora chishandiso yave kuwanikwa kune wese munhu
Kana iwe uri mugadziri uye usingakwanise kusaina iyo beta kuyedza iyo nyowani Apple Kuongorora chishandiso, usazvidya moyo nekuti yatove kuwanikwa pachena. Iyi webhu application nyowani yakavhurwa muchikamu chekuyedza pakutanga kwemwedzi asi mushure memazuva akati wandei ekuyedzwa, Apple yasarudza kumisa maitiro aya uye kubvumira vese vanogadzira kunakidzwa nehumwe huwandu hwehuwandu hwezvishandiso zvavakaburitsa muApp Store.
Kutenda iTunes Batanidza Kuongorora, iwe unogona kuziva zvakanyanya chaizvo mashandisiro anoita mushandisi kana vawana kunyorera kwedu. Kunyanya, nekuda kweAnalytics, vanogadzira vanogona:
Wona kangani vashandisi vanoshanyira peji rako reapp muApp Store.
Ziva kuti vangani vashandisi vanovhura iyo application nekufamba kwenguva.
Tarisa kutengesa kwe-mu-app kutenga mawedzera-ons
Gadzira yakasarudzika kushambadzira mishandirapamwe uye tarisa kubudirira kwavo.
Tsvaga kuti ndeapi mawebhusaiti ayo anonyanya kutaura nezvekushandisa kwako.
Vaya vanga vachifarira Kuongororwa kwemazuva akati wandei vanobvuma izvozvo chokushandisa ichi chinofanira kunge chakurumidza kuuya. NeApp Store iri kuwedzera kuguta, kumira kunze kwakaoma uye nedhata rakapihwa nechishandiso ichi zvinokwanisika kuti unzwisise zviripo zvatiri kukundikana uye nekuzvivandudza kana, kana tiri kuzviita nemazvo, zviwedzere zvakanyanya.
Recuerda, que kuwana kune chishandiso kunogumira kune vanogadzira avo parizvino vakanyoreswa muchirongwa chekuvandudza kunyorera kweIOS, iyo chete inoshanda yekupinda iTunes Connect uye kukwanisa kuwana huwandu hwezvishandiso zvakaburitswa muApp Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Iyo iTunes Unganidzo yekuongorora chishandiso yave kuwanikwa kune wese munhu
Apple Watch: chinotevera chinangwa chembavha